Madagascar oil SA: hivarotra “fuel” mora amin’ny Jirama | NewsMada
Madagascar oil SA: hivarotra “fuel” mora amin’ny Jirama
Tanteraka ihany ny fifanarahana varotra eo amin’ny orinasa mpamokatra menaka mavesatra (fuel lourd) Madagascar Oil SA sy ny Jirama. Menaka mavesatra tsara kalitao amin’ny vidiny mora sy afaka mifaninana eo amin’ny tsena.
Maromaro ny zava-bita tato anatin’ny roa taona nataon’ny orinasa Madagascar Oil SA (MOSA), mitrandraka solika menaka mavesatra any Tsimiroro. Nahomby ny andrana nampiasana ny menaka mavesatra “fuel” tany amin’ny toby famokarana herinaratra eny Mandroseza, ny septambra 2016. Tsara ny kalitaony satria kely ny tahan’ny “souffre” ao aminy, sady tsy miovaova, azon’ny Jirama ampiasaina tsara. Araka izany, vita sonia ny fifanarahana varotra eo amin’ity orinasa ity sy ny Jirama, hamatsiana solika menaka mavesatra, “Low-sulfur heavy fuel oil” (LSHFO).
Hatao ny lalana Tsimiroro-Maintirano
Manampy ireo, nahazo ny fanomezan-dalana mikasika ny tontolo iainana ny orinasa MOSA, nahafahana nanangana ireo fotodrafitrasa ilaina amin’ny fitrandrahana any Maintirano, ary nankatoavin’ny tompon’andraiki-panjakana sy ny mponina any ifotony. Andrasana, ankehitriny, ny fanomezana-dalana avy amin’ny fanjakana, hanombohana ny asa, sy ny fanarenana ny lalana Tsimiroro-Maintirano.
Ankoatra ireo, niova ny mpitantana ao amin’ny MOSA. Mitazona ny administratera jeneraly (AD) sady misahana ny fitantanana ankapobeny i Russell Kelly. Tale teknika sy ny famokarana i William Donadio ary talen’ny raharaha fifandraisana i Ananda Idris.